Indawo: Ikhaya » Ukuthumela » Ukuphepha » UMnyango Wezwe wase-US: Ungayi eCanada
Izeluleko zakamuva zokuhamba ezikhishwe nguMnyango Wezwe wase-US, zithuthukise iCanada yaba yi-Level 3, ethi 'Cabanga kabusha ngokuhamba'.
Izakhamizi zase-US zixwayise ukuthi zingayi eCanada.
UMnyango Wombuso wase-US uphakamisa izinga lokweluleka ngezokuvakasha laseCanada libe ngu-3.
Ukuhamba phakathi kwe-US ne-Canada akunconyiwe ngenxa yesifo esiqhubekayo se-COVID-19
UMnyango Wezwe wase-United States usukhuphule izinga lokuxwayiswa kwabantu baseMelika abahambela eCanada, weluleka zonke izakhamizi zase-US ukuthi ziphinde zikucabangele ukuya kuleli phakathi kobhadane oluqhubekayo lwe-COVID-19.
The UMnyango WezoMbuso wase-US ikhiphe isitatimende ithi ihlukanise kabusha izeluleko zokuhamba ezisuka ku-Level 2 - “sebenzisa ukuqapha okukhulu” - kuya ku-Level 3 - “cabanga kabusha ngokuhamba” — on the advice of the CDC, due to “a high level of COVID-19 in Canada.”
UMnyango Wezwe wase-US, kanye ne Izikhungo Zase-US Zokulawulwa Nokuvikelwa Kwezifo (CDC), uphinde waxwayisa ngokuhambela eSwitzerland, phakathi kwamanye amazwe ngenxa yokwanda kwamacala amasha okutheleleka nge-COVID-19.
Ezinsukwini eziyisikhombisa ezedlule, kubikwe amacala amasha angaphezu kwe-21,000 e-COVID-19 eCanada. Ngasikhathi sinye, ngaphezu kwama-900,000 amacala amasha e-COVID-19 aqoshwe ngesonto eledlule e-US, ngokusho kweCenters for Disease Control and Prevention (CDC).
Canada Centers for Disease Control and Prevention Covid-19 I-united states
IYurophu isusa imikhawulo yezokuvakasha kwamanye amazwe, ifaka ohlwini lwabamnyama amanye
Amathrendi aphezulu okudla kwehlobo angu-10 ango-2022
Agasti 31, 2021 ku-14: 19
Hmmm. Ngama-apx 10% wabantu base-US, sisebenza kancane noma ngaphansi kumthetho we-10% wokucabanga okuningi.
Uma iCanada inamacala amasha angama-21,000 ama-Covid, i-US kufanele ibe ne-apx 210,000 kuphela kepha kukhona ama-900,000.
Kuzwakala sengathi abantu baseCanada akufanele bahambele e-US>